Xog xasaasi ah: Shirkii laamaha amaanka oo qorshe halis ah lagu dejiyey | SMC
Home WARARKA MAANTA Xog xasaasi ah: Shirkii laamaha amaanka oo qorshe halis ah lagu dejiyey
Xog xasaasi ah: Shirkii laamaha amaanka oo qorshe halis ah lagu dejiyey
Fahad yaasiin ayaa aad uga walwalay Kulankii xalay Gudd.muudeey iyo Mursal ay la qaateen Mucaaradka, Fahad yaasiin ayaa aad uga caroodey kulankaasi, wuxuuna durba isugu yeerey Taliyayaasha ciidamada Sida milatariga iyo Boliska.
kulanka oo qaatey saacado badan ayaa lafahamsanayahaya in lagu falanqeyey sidii laga yeeli lahaa Guddoonka Baarlamaanka ee ku biirey shirkii mucaaradka ugu socodey Hotel Jazeera.
Arinta halisteeda wadata ayaa ah kadib markii shirka laga soo jeediyey in lakhaarijiyo Guddoonka kadibna loo saariyo kooxda nabadiidka alshabaab.
waxaana lasheegey in aragtidan soo jeediyey Cabdullahi Adan kulane Jiis oo ah Teliye kuxigeenka NISA.
waxaana xogtu sheegeysaa in laga wada aamusey fakarkiisa.
MDFarmaajo ayaa u sheegey Qaar kamid saraakiisha ugu dhow oo uu kamid yahay Abdullahi dheere in wax waliba isbedeli karaan wuxuuna rajo xuma kamuujiyey xaaladaha taagan walow Cabdullahi Dhere siiyey jawaab degan oo eheed ;Mudane Madaxweyne Ragaas waa Niman Dani isu gaysay oo keliya Culeysna malaha, waxaan aaminsanahay in laka furfuri karo; waxaa sidaas Yiri Teliyaha Hogaanka Dabagalka Col. Cabdullahi Dheere.
Dhanka kale fahad yaasiin ayaad moodaa inuu Wali Cadayn mowqifkiisa ku aadan cida uu doonayo in ladhiso inkastoo Abdulalhi kulane iyo Abdullahi daahir diideen in Farmaajo cidan ahayn ladhiso hadana Fahad weli kuma qanacsana in Farmaajo ladhisi karo.
shaley ayey eheed markii uu soo gaarey muqdisho lateliyaha dhanka Amaanka Raisul wasaaraha Ethiopia Abey Axmed kaas oo kulan albaabada u xirnaa la qaatey MD Farmaajo, walow aan lashaacin ajandaha rasmiga ah ay kawada hadleen hadana waxaa lafahamsanyahay in amniga Doorashada iyo sidii loo soo celin lahaa MD farmaajo ay eheed qodobka ugu muhiimsan ee miiska saarnaa.
waxaana saacado kadib imaanshiyaha masuulkan soo baxaya xogo hoose oo muujinaya in amaanka Guddoonka baarlamaanka halis kujiro.
Previous articleMuudey oo qirtay inuu ka danbeeyay ridistii Xukuumadii Xasan Kheyre